Sina Apple, poara, voaloboka, masinina fanodinana ampongabendanitra ary orinasa mpamokatra | Hanketo
Apple, poara, voaloboka, masinina fanodinana ampongabendanitra ary tsipika famokarana
Apple, poara, voaloboka, masinina fanodinana ampongabendanitra sy fonosana famokarana: tavoahangy fitaratra, tavoahangy plastika PET, fantsom-bokotra, fonosana malefaka aseptika, baoritra biriky, baoritra ambony azo zahana, kitapo aseptika 2L-220L amin'ny amponga, fonosana baoritra, kitapo plastika , Kapoaka tinetika 70-4500g.
Apple, poara, voaloboka, masinina fanodinana ampongabendanitra ary tsipika famokarana dia mety amin'ny fanodinana paoma, poara, voaloboka ary ampongabendanitra. Izy io dia afaka mamokatra ranom-boankazo mazava, ranom-boankazo, ranom-boankazo, vovoka, voankazo. Ny tsipika famokarana dia ahitàna ny ascenseur Scraper, mpanadio bubble, mpanadio borosy, preheater, masinina mialoha, crusher, beater, juicer, juicer fehikibo, centrifuge volo marindrano, centrifuge lolo, centrafuge an'ny ultrafiltration, fitaovana filtration, fitaovana adsorption resin, filtration carbon carbon activated fitaovana, fitaovana déolorization, rafitra hydrolysis anzima, homogenizer, degasser, milina fanamafisam-peo amin'ny fantsom-bozaka ary milina famenoana aseptika. Ny famokarana tsipika manana mandroso famolavolana hevitra sy avo lenta ny mandeha ho azy; ny fitaovana lehibe dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony avo lenta, izay mahafeno tanteraka ny fepetra takiana amin'ny fahadiovana amin'ny fikarakarana sakafo. Ny fitaovana fanodinana paoma dia novolavolaina sy novokarina tanteraka ary nifoka tanteraka ny foto-kevitra mandroso any Eropa sy Amerika. Ny orinasa dia manana andian-tsarimihetsika maodely tsara miaraka amin'ny tanjaka feno amin'ny famolavolana sy ny fampandrosoana ny tetikasa, ny famokarana sy ny famokarana, ny fametrahana ary ny debugging mankany amin'ny fiofanana ara-teknika sy serivisy aorian'ny fivarotana.
* Fahaiza-manao fanodinana manomboka amin'ny 3 taonina / andro ka hatramin'ny 1500 taonina / andro voankazo vaovao.
Apple, poara, voaloboka, masinina fanodinana ampongabendanitra ary toetra mampiavaka ny tsipika famokarana: (1) nandritra ny fanorotoroana an'i Apple, raha jerena ny fisian'ny fanjanahana anzima, dia nampiasa ny fomba famafazana asidra isoasorbika aho raha nanorotoro mba hisorohana ny fihenan'ny anzima ny famoahana ny polyphenol oxidase sy ny fifandraisan'ny oksizena mandritra ny fizotran'ny fanorotoroana; (2) eo am-panaovana ranom-boankazo, rehefa heverina fa mbola be dia be ny paoma maintso aostralianina sarotra ny vaky ny pectin, sarotra vaky ny sela sela ary sarotra vonoina ny ranony. Ity famolavolana ity dia mandray ny fomba famoahana pectin alohan'ny tsiranoka, amin'ny fampiasana ny vokatry ny Pectinase hanaparitahana pectin hanatsara ny vokatra ranom-boankazo; (3) mba hanatsarana ny tahan'ny fanazavana ny ranom-boankazo dia raisina ny fitambaran'ny hydrolysis anzima sy ny teknolojia membrane ultrafiltration.
Previous: Oliva, plum, bayberry, paiso, apricot, milina fanodinana plum ary tsipika famokarana
Manaraka: Fitaovana fisotro sy tsipika famokarana